दन्त र टीएमजे - मन जीवित - मानसिक स्वास्थ्य र विश्राम
कार्ला जानजेनबाट प्रशंसापत्र
अक्टोबर 5, 2001
“मलाई सँधै दन्त चिकित्सकमा जान डर लागेको छ, दुखाइ इत्यादिको कारणले होइन, तर फ्रिजिंगको स्थायी प्रभावहरूको कारण हो। मैले DAVID लाई एक प्रयास गर्ने निर्णय गरें र ठिक छैन।
मलाई दुई पुरानो फिलि removedहरू हटाइयो र नयाँ राख्नु आवश्यक पर्‍यो। यी भर्नेहरू निकै ठूलो र गहिरा थिए। मैले तपाईको सल्लाहलाई विश्वास गरेँ र आफैंलाई विस्तारित डीप अल्फा रिलक्सरको लागि सेट गरे, दन्त / दर्दको लागि डिजाइन गरिएको / ० मिनेट सत्र।
प्रभावहरू र मैले महसुस गरेको पीडाको कमी देखेर म छक्क परें। मलाई मेरो वरिपरि भइरहेको सबै कुराको बारेमा पूर्ण जानकारी थियो र मलाई एक वा दुई सानो पिंग्स भने महसुस भयो तर मलाई फेरि डेभिड प्रयोग गर्नबाट रोक्नको लागि केही छैन।
मैले स्वीकार गर्नै पर्दछ कि तपाईको निर्णयमा विश्वासको ठूलो मात्रा लिइएको थियो यो प्रयास गर्नका लागि तर मँ खुशी छु। केवल मलाई फ्रिजिंगको प्रभावहरू सहन पनि गरेन तर मलाई धेरै स्फूर्ति र स्फूर्ति महसुस भयो। यदि मैले फ्रिजिंग छनौट गर्ने हो भने, मँ अझै दन्त चिकित्सकको कुर्सीमा बसेर सत्र चलाउने गर्छु किनकी म पछि धेरै सजिलो महसुस गर्छु।
मेरो छोराले हालसालै चार दाँत दाँतहरु हटाउन दन्त शल्य चिकित्सा गरेको छ। जब उहाँ शल्यक्रियाबाट घर आइपुग्नुभयो उहाँ धेरै पीडामा हुनुहुन्थ्यो त्यसैले उनले कोडिनका साथ दुईवटा टाईलोनल लगे। यसले सबै दुखाइ कम गरेन, त्यसैले उसले पन्ध्र मिनेट सम्म सत्र चलायो। आफ्नो सत्र चलाए पछि, ऊ ब्यूँझ्यो र धेरै पीडा महसुस गर्न थाल्यो र त्यसैले अर्को लामो सत्रमा दौडियो।
दंत चिकित्सकको बखत मलाई सत्र प्रयास गर्न प्रोत्साहित गर्नु भएकोमा धन्यवाद, मेरो दन्त चिकित्सकहरू अबदेखि धेरै रमाइलो हुनेछन्। "
शेरिल मार्टिनबाट प्रशंसापत्र
"डेभिडसँग मेरो पहिलो अनुभव अक्टोबर, १ 1996 XNUMX। मा भएको थियो। त्यस समयमा, म पछिल्लो सात बर्षदेखि पीडादायी, र लगातार कान दुखाइको सामना गर्दै थिएँ। म यी कानहरूका बारेमा धेरै चिकित्सकहरू भएको थिएँ, र तिनीहरूको उपस्थितिको लागि कुनै ठोस कारण र कुनै उपचार दिइएन।
म एक असम्बन्धित कुराको बारे मा क्यारोप्रैक्टर भेट्न गएँ, र मलाई भनियो कि मेरा कानहरू सम्भवतः तनाव सम्बन्धी थिए, र अझ विशेष गरी, शायद टिएमजेको नतीजाको रूपमा। मलाई तनाव कम गर्न र शरीरलाई शान्त पार्न ध्यान दिन सुझाव दिइएको थियो।
ध्यान प्रविधिको साथ परिचित भैरहेको छैन, मलाई तपाईको बारेमा बताइएको थियो, र तपाईले प्रस्तुत गरेको सेवा। डेभिडसँग धेरै सत्र पछि, मैले याद गरें कि मैले कानहरू पाइन। अब, डेभिड नियमित रूपमा प्रयोग गरेको एक बर्ष पछि, म केवल एक मात्र दुखाइ पाएको रिपोर्ट गर्न पाउँदा खुसी छु!
DAVID को उपयोग बाट हुने लाभहरु मेरो कानहरु लाई निको पार्ने धेरै टाढा पुगेको छ। मेरो उर्जाको स्तर बढेको छ; म राम्रो निदाउँछु; म मानिसहरूलाई प्रभावकारी रूपमा संवाद र कुराकानी गर्छु, र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, म यति "तनावग्रस्त छैन!"
मलाई नयाँ जीवन शैली पत्ता लगाउन मद्दत गर्नुभएकोमा धन्यवाद। "
डा। रोय सीए फेयरनबाट प्रशंसापत्र
क्याम्रोज, अल्बर्टा, क्यानाडा
"हाम्रो कार्यालय बहुविध उपयोगको साथ एक शक्तिशाली प्रभावी उपकरणसँग परिचित भएको थियो।
DAVID मेशिनले हाम्रा ग्राहकहरुलाई क्रमिक ध्यान राज्यमा मार्गदर्शन गर्न प्रकाश र ध्वनी प्रयोग गर्दछ। यसले तिनीहरूका मांसपेशीहरूलाई आराम दिन्छ ता कि TMJ मा अनावश्यक तनाव कम हुन्छ र समय चेतना आराम हुन्छ। १ घण्टा अपोइन्टमेन्ट पछि “यस्तो लाग्दैन जस्तो लाग्छ” जस्तो टिप्पणीहरू सुन्न सकिन्छ।
हाम्रा केही कर्मचारीहरूले तनाव राहतका लागि युनिट प्रयोग गरिरहेका छन् र हाम्रो छोरीले यसलाई सन्तुलनको लागि प्रयोग गर्दैछ। यसका अरू धेरै प्रयोगहरू छन्। दन्तचिकित्सा र व्यक्तिगत प्रयोगको लागि हामी यो अवधारणाको बारेमा धेरै उत्साहित छौं।
डा। होवार्ड लिम, डीडीएस, बीएससीबाट प्रशंसापत्र
अक्टोबर 30, 1997
“यस वर्षको अप्रिलमा जब तपाईंले मलाई पहिलो चोटि बोलाउनुभएको थियो (टोरन्टो स्टारमा मेरो बारेमा पढिसकेपछि) मानिसहरूलाई शान्त पार्न इलेक्ट्रोनिक सहायताका लागि परिचय दिंदा म शंका गर्थे। भाग्यवस, मेरो संशयवाद सधैं खुला दिमागले सन्तुलित रहेको छ। डेभिड पहिलो पटक अनुभव गरिसकेपछि म धेरै प्रभावित भएँ कि यसले मभित्र कसरी विश्राम गर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ। मैले तपाईलाई उपलब्ध गराएको अध्ययनहरू पढें र यो जान्न पाउँदा खुशी भए कि आराम गर्ने यस प्राविधिक कार्यले मात्र काम गर्दैन, तर एकदम सुरक्षित छ। यस विन्दुमा र कुनै हिचकिचाहट बिना, मैले डेभिड खरीद गरें। एक वैज्ञानिक व्यक्ति भएको कारण, म अहिले मेरो बिरामीहरूको एकाई प्रयोग गरेर अलि अप्ठ्यारोमा परेको थिएँ त्यसैले यसलाई पहिले आफैंमा प्रयोग गरें। म डेभिड लगाउँदछु जब म राती सुत्न गएँ र भेट्टाए कि म नियमित रूपमा हार्डवेयर अझै पाउन सक्दछु प्रोग्राम समाप्त भए पछि पनि। यस बिन्दुमा मैले मेरो स्टाफमा एकाई प्रयोग गर्न थाले, उनीहरूले के सोचे भनेर हेर्न। उनीहरू सबैले डेभिडलाई रमाईलो र विभिन्न प्रकारका संवेदनाहरू अनुभव गरे (गहिरो निद्रा सहित, "अर्को ग्रहमा रहेको" र फ्लोटिंगको अनुभूति सहित, केहि उल्लेख गर्न)।
अन्तमा मैले मेरा बिरामीहरूमा डेभिड प्रयोग गर्न सुरु गरें। मैले यी मध्ये सबैभन्दा धेरै डराएकोमा प्रयोग गरें। त्यहाँ तीन समान धेरै समानताहरू थिए। तीनै जना महिला थिए (दुई उनकी शुरुवातको बिसौं र एक उनको शुरुवात in० को दशकमा) र तीनैजना बुद्धिको दाँत शल्य चिकित्साले हटाउनु पर्ने थियो। यी दुई महिलाले मलाई पहिलो पटक देखेका थिए, र एकजनाले मेरो अभ्यासबाट लामो अनुपस्थिति पछि मलाई देखिरहेका थिए। तीनै जनाको आँखामा आँसु थालिसकेको थियो जब म कोठाभित्र पसे अनि ती सबै डर र चिन्ताले थरथर काम्दै थिए।
मैले घण्टा र आधा प्रक्रियामा DAVID प्रयोग गरें। म देखेर छक्क परें कि यी कुनै पनि बिरामीहरू समेत सरेनन। तिनीहरू सचेत रहे, तर धेरै आराम!
म केवल वर्षौं पहिले यस प्रविधिको बारेमा जान्न चाहन्थें, यदि म टोरन्टोमा सबैभन्दा लोकप्रिय दन्त चिकित्सक हुने थिएँ। ”
डा। ब्रायन डी। रिड, बीएससी, पीएचडी, डीडीएस बाट प्रशंसापत्र
नोभेम्बर 15, 1995
“हामी हाम्रा सबै बिरामीहरूलाई डेभिड प्रस्ताव गर्दछौं। धेरै जसोले यो प्रयास गर्छन् यो अत्यन्तै आरामदायी पाउँदछन्, विशेष प्रकारका बिरामीहरूलाई TMJ समस्या भएका जो सामान्यतया खोल्न समस्या हुन्छ। मैले पत्ता लगाए कि यी बिरामीहरू बढी सहज देखिन्छन् र उनीहरूको मुख बन्द गर्न वा वरिपरि घुम्नको लागि कम कम प्रवृत्ति देखाउँछन्। यातनामा मद्दत पुर्‍याउन र राहत दिन म घरमा अक्सर आफैं उपकरण प्रयोग गर्छु अनिद्रा। उडानको बखत म यसलाई सधैँ साथमा लिन्छु किनकि यसले हावामा हवाईजहाजको समय यति चाँडो बितेको देखिन्छ। ”